MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Billing New Service Policy FAQs MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ အသစ်
၁။ ဒီမူဝါဒရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေက ဘာလဲ?
ဒီမူဝါဒရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ လစဉ် ပုံမှန်ငွေပေးဆောင်သော သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင်ပြေစွာ သုံးစွဲ နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
၂။ ဘယ်လို ဝန်ဆောင်မှုတွေက သက်ရောက်မှုရှိမှာလဲ?
ဒီမူဝါဒအသစ်သည် သုံးစွဲသူများအား ပေးထားသော B2C ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် GSM, CDMA, PSTN, ADSL, IP Star နှင့် FTTH တို့ဖြစ်သည်။
၃။ ဒီမူဝါဒကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမလဲ?
ဒီမူဝါဒကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိသော သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့ ရယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ ယာယီဆိုင်းငံ့ခံရခြင်း သို့မဟုတ် အပြီးပိတ်သိမ်းခံရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
၄။ ဒီလို မူဝါဒကို သုံးစွဲသူတွေအပေါ် ကျင့်သုံးလို့ ရပါသလား?
ပိုမိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် Postpaid ဝန်ဆောင်မှုအား သုံးစွဲရန်လျှောက်ထားသော သုံးစွဲသူများအားလုံးတွင် ယခုကဲ့သို့သော မူဝါဒ ကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဌာနများတွင်သာမက အခြား postpaid ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဂတ်စ် အစရှိသည့် ဌာနများတွင်လည်း ယခုကဲ့သို့ မူဝါဒရှိပါသည်။
၅။ GSM နှင့် CDMA (မိုဘိုင်း) ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ယခု မူဝါဒကို ဘယ်လို ကျင့်သုံးမလဲဆိုတာ နမူနာ ပြပေးပါ။
• ဝန်ဆောင်မှုစတင် အသုံးပြုပြီး နောက်လများတွင် သုံးစွဲသူထံသို့ ငွေတောင်းခံလွှာများ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
• ငွေတောင်းလွှာ၏ သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးပေးဆောင်ရက်မှာ လ တစ်လ၏ နောက်ဆုံး အလုပ်လုပ်ရက် ဖြစ်ပါသည်။
• ပထမတစ်လတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက အဝင်ခေါ်ဆိုမှုသာ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
• ဒုတိယလတွင်လည်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက အဝင် အထွက် ခေါ်ဆိုမှုများ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
• တတိယလတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုအား ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
• ပြန်လည် သုံးစွဲလိုပါက လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ကာ ကနဦးအစမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း MPT မှ သုံးစွဲသူ ယခင် အသုံးပြုထားသော နံပါတ် ပြန်လည် အသုံးပြုခွင့် ရရန် အာမခံပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၆။ PSTN ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ယခု မူဝါဒကို ဘယ်လို ကျင့်သုံးမလဲဆိုတာ နမူနာ ပြပေးပါ။
• ငွေတောင်းလွှာ၏ သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးပေးဆောင်ရက်မှာ လ တစ်လ၏ နောက်ဆုံး အလုပ်လုပ်ရက်ဖြစ်ပါသည်။
• ဒုတိယ၊ တတိယ နှင့် စတုတ္ထလများတွင်လည်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက အဝင် အထွက် ခေါ်ဆိုမှုများ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
• ပဉ္စမလတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုအား ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ ADSL ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ယခု မူဝါဒကို ဘယ်လို ကျင့်သုံးမလဲဆိုတာ နမူနာ ပြပေးပါ။
• ပထမတစ်လ နှင့် ဒုတိယတစ်လ တွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက ဝန်ဆောင်မှု ယာယီဆိုင်းငံ့ သွားမည်ဖြစ်သည်။
• တတိယလတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုအား ပိတ်သိမ်း သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
• ပြန်လည် သုံးစွဲလိုပါက လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ကာ ကနဦးအစမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း MPT မှ သုံးစွဲသူ ယခင် အသုံးပြုထားသော နံပါတ် ပြန်လည် အသုံးပြုခွင့် ရရန်အာမခံပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၈။ IP Star ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ယခု မူဝါဒကို ဘယ်လို ကျင့်သုံးမလဲဆိုတာ နမူနာ ပြပေးပါ။
၉။ FTTH ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ယခု မူဝါဒကို ဘယ်လို ကျင့်သုံးမလဲ ဆိုတာ နမူနာ ပြပေးပါ။
• ဝန်ဆောင်မှုစတင် အသုံးမပြုမှီ သုံးစွဲသူထံသို့ ငွေတောင်းခံလွှာများ (Prepaid invoice) ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။
• ငွေတောင်းခံလွှာ၏ သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးပေးဆောင်ရက်မှာ လ တစ်လ၏ နောက်ဆုံး အလုပ်လုပ်ရက်ဖြစ်ပါသည်။
• ငွေတောင်းခံလွှာများ (Prepaid invoice) များကို သက်ဆိုင်ရာ လများတွင် ပေးဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါက ပထမလ၊ ဒုတိယလ နှင့် တတိယလအထိ ဝန်ဆောင်မှုများ ယာယီဆိုင်းငံထားခြင်း ခံရမည် ဖြစ်သည်။
• စတုတ္ထလတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေတောင်းခံလွှာများ (Prepaid invoice) ကို ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုအား ပိတ်သိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
• ပြန်လည် သုံးစွဲလိုပါက လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ကာ ကနဦးအစမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
FTTH ဝန်ဆောင်မှု၏ ရှင်းလင်းချက်-
၁။ သုံးစွဲသူ အားလုံးအကျုံးဝင်သည်။
၂။ “Block” ဆိုသည်မှာ သုံးစွဲသူမှ လိုင်းအား အသုံးပြု၍ မရသော်လည်း လိုင်းမှာ ဆက်လက် အသက်ဝင်နေသည်။
၃။ “Termination” ဆိုသည်မှာ သုံးစွဲသူသည် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုခွင့်မရသလို သက်ဆိုင်ရာ network မှလဲ ထိုလိုင်းအား ဖြတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် FTTH ဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်လည်အသုံးပြုချင်ပါက သုံးစွဲသူသည် ကနဦးအစမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
၄။ အကယ်၍ “block” ဖြစ်နေပါက လစဉ်ကြေးထွက်ရှိမည် မဟုတ်ပဲ ငွေပေးချေလွှာများလည်း ထွက်ရှိမည် မဟုတ်ပေ။
၅။ သုံးစွဲသူသည် ၎င်း၏ ပေးဆောင်ရန်ကျန်ရှိနေသော သတ်မှတ်ရက်လွန် ငွေပေးချေလွှာ များကို ပေးဆောင်ပါက ၎င်းအား “Active” သို့ပြောင်းလဲပေးမည် ဖြစ်ပြီး ငွေပေးချေလွှာများလည်း ပုံမှန် ထွက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
၁၀။ ကျွန်ုပ်သည် ယာယီဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အပြီးပိတ်သိမ်းခြင်း စာရင်းတွင် မပါဝင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?
၁၀၆ (call center) သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ TRA နှင့် commercial ရုံးများတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁၁။ ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း ခံရသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဘယ်လို ပြန်ဖွင့်ရမလဲ?
ငွေပေးချေရန် သတ်မှတ်ရက်လွန်နေသော ငွေပေးချေလွှာများ လက်ဝယ်ရှိပါက နီးစပ်ရာ စာတိုက်၊ TRA ရုံး သို့သွားရောက်ကာ ငွေပေးဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် CB ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်၊ MEB ဘဏ် တို့တွင်လည်း ထိုငွေပေးချေလွှာများဖြင့် ပေးချေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုငွေပေးချေလွှာများ လက်ဝယ်မရှိပါက နီးစပ်ရာ MPT TRA ရုံးများသို့ သွားရောက်ကာ ထို ငွေပေးချေလွှာများအား ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထို ငွေပေးချေလွှာများအား အပြည့်အ၀ ပေးချေပြီးပါက ရပ်ဆိုင်းခံထားရသော ဝန်ဆောင်မှုများသည် အလုပ်လုပ် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပြန်လည် အသုံးပြုလို့ရမည်ဖြစ်သည်။
၁၂။ အပြီးပိတ်သိမ်းခြင်းခံရသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြန်လည် အသုံးပြုရန် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ?
ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက နီးစပ်ရာ commercial ရုံးများသို့သွားရောက်ကာ ကနဦးအစမှ လျှောက်ထားသလို အစအဆုံးပြန်လည် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အပြီးပိတ်သိမ်းလိုက်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြန်လည် အသုံးပြု၍မရပါ၊ အသစ်မှစတင်၍ ပြန်လည် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သုံးစွဲသူ ယခင် အသုံးပြုခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြန်လည် ရယူနိုင်မည်ကိုမူ အာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပဲ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ဖုန်းနံပါတ် အသစ် ဖြစ်သွား နိုင်မည် ဖြစ်သည်။